Indiza iyithinta kanjani imvelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Asivamile ukucabanga ngakho, ngoba abantu abaningi bayakujabulela ukungena indiza ukuvakashela amazwe angaphandle kanye / noma ukuyobona izihlobo zabo. Kuyindlela yezokuthutha esivumela ukuthi sihambe amabanga amade emahoreni ambalwa nje, okwenza kube ngesinye sezindlela ezisetshenziswa kakhulu.
Nokho, iqiniso ukuthi ukuhamba ngendiza kulimaza kakhulu iplanethi yethu. Asibone indiza iyithinta kanjani imvelo.
Ukuhamba kwezindiza ngoNovemba 15, 2016 ngo-9: 45 isikhathi saseSpain.
Isibhakabhaka, yize singabonakala sinjalo, asikaze sicace, hhayi ngokuphelele. Njalo ngeminithi kukhona abaseduze Izindiza eziyi-11.000 emoyeni ndawondawo emhlabeni. Ubufakazi balokhu isithombe esingenhla, sithathwe kuwebhu IVirtuel Radar. Kunamakhulu amabhanoyi kule ngxenye yeYurophu kuphela, futhi lelo inani elandayo njengoba nenani labantu landa.
Kepha kuyindlela yezokuthutha engcolisa, nokuningi. Umkhakha wezindiza ubhekele ukusondela Amaphesenti ama-2,5% wokukhishwa kwesikhutha emhlabeni jikelele, kepha izindiza nazo zikhipha isulfure, intuthu, umusi wamanzi ne-nitrogen oxide nayo eyakha i-ozone eshisayo (engadidaniswa ne-ozone ye-stratospheric, ungqimba lwayo oluvikela imisebe yelanga), eyingozi kakhulu empilweni abantu.
I-infographic iqhathanisa ukukhishwa okubangelwa izindlela ezahlukahlukene zokuhamba.
Ingabe kukhona okungenziwa ukubenza bangangcolisi kakhulu? Yebo kunjalo: sebenzisa izitimela lapho kungenzeka khona. Bangcolisa kancane kakhulu futhi, yize kuthatha isikhathi eside ukufika lapho uya khona, kungasebenza njengezaba zokukhuluma nabangane noma nomndeni abahamba nathi. Kepha intela emelene nomphumela wokushisa okushisayo ingafakwa nasezinkampanini zezindiza, ngoba ngokwesibonelo eJalimane bathola uxhaso lwama-euro angaphezu kwezigidi eziyishumi ngonyaka ngokusho kweFederal Environment Agency.
Ukube le mixhaso ibingasuswa futhi kufakwe intela yokuqeda izindleko zemvelo ezibangelwe yilezi zithuthi, nakanjani bekungangcola kancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Indiza iyithinta kanjani imvelo